Helping Our People Everyday . . .
Pregnancy and Women Health
Our Healthcare Provider
Diet and Nutrition Health Health Tips Healthy Lifestyle
နနွင်း နဲ့ ကျန်းမာရေး….
နနွင်း နဲ့ ကျန်းမာရေး…. “နနွင်း” ကို ရှေးယခင်ခေတ်တည်းကနေ အခုထိဟင်းချက်ရာတွင် အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းအဖြစ် အသုံးပြုရုံသာမက ဆေးဖက်ဝင်တဲ့သဘာဝပစ္စည်းအဖြစ်ပါ ခေတ်အဆက်ဆက်အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ နနွင်းမှာ ကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူပြုစေတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိပါတယ်နော်။
ပန်းသီးတစ်လုံးရဲ့အံမခန်းစွမ်းအား… အသီးတွေထဲမှာဆို ပန်းသီးဘဲ စားတတ်တယ်ဆိုတဲ့ကိုကိုမမတို့အတွက် ကျန်းမာရေးသတင်းကောင်း__________________________________________________________________ကျန်းမာရေးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ မေးခွန်းများမေးမြန်းလိုပါက HOPE မှ ဆရာဝန်တွေကို မနက် ၈ မှ ည ၁၀နာရီ အတွင်း
Diet and Nutrition Health Tips Healthy Lifestyle
အဟမ်း!….ညညဆိုရင် အပြင်တွေထွက်ပြီး အကင်တွေလိုက်ဝယ်စားနေတယ်မလား… ၇ရက်လုံးမှာ ရုံးသမားတွေရဲ့ အများစု အကြိုက်ဆုံးရက်တွေဖြစ်ဟာ အမေဇင်း Friday, Saturday ညနေတွေပေါ့။ အပေါင်းအသင်းများနဲ့ အများအားဖြင့်ချီတက်လေ့ရှိတာကတော့ အမြဲလိုလိုဆိုင်အပြည့်ဖြစ်နေတတ်တဲ့ အကင်ဆိုင်များပါတယ်။ အကင်မှ အကင်ဆိုတဲ့ ကိုကိုမမတွေကို
Diet and Nutrition Health Health Tips
Dec 9, 2021 Hope
” ဝက်သားဆို အကောင်လိုက်မောင်းသွင်းမည့်သူများဖတ်ရန် “စာဖတ်သူထဲမှာရော ဝက်သားဆို ဘာလာလာစားမယ့်လူရှိပါသလား။ ဝက်သားဆလပ်၊ ဝက်သားတုတ်ထိုး၊ ဝက်သားကင်၊ ဝက်အူမကြီး အကျွပ်ကြော်၊ ဝက်နားရွက်သုပ် စသည်ဖြင့်စားလို့ကလည်း ကောင်းနေတော့ မကြိုက်တဲ့လူရှားပါတယ်။
ပိန်ချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အလုပ်တွေများနေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် အစာမစားမိတာမျိုးဆိုရင် ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲ?…• အစာစားချိန်မမှန်တာကြောင့် သွေးတွင်းသကြားဓါတ်ကျဆင်းလာပြီး ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ နုံးခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်းရင်တုန်ခြင်းတွေအပြင် အရမ်းဆိုးလာတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင် တက်ခြင်း၊ သတိလစ်ခြင်း စတဲ့ ဦးနှောက်ကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ပြသနာများစွာပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါတယ်။•
မီးနီကိုရွှေ့ပြီး သွားစရာရှိတာ သွားကြမယ်
မိဘတိုင်း စိုးရိမ်လွန်ကြတဲ့ ကလေးငယ်လေးတွေ အဖျားကြီးပြီး တက်ခြင်း
မပေါ့ဆသင့်တဲ့ နာတာရှည် ဂေါက်ရောဂါ
ဝက်ခြံတွေကို အလျင်အမြန် တိုက်ထုတ်ပေးမယ့် Benzoyl peroxide
Home – Hope